Cumar Islow "Waraaq Shirqool Ah Ayaa Xafiiska Farmaajo Looga Soo Diray…. " – SBC
Cumar Islow "Waraaq Shirqool Ah Ayaa Xafiiska Farmaajo Looga Soo Diray…. "
Muqdisho-Xildhibaan Cumar islow oo ka mid ah xoghayeyaasha xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in waraaq uu ku tilmaamay inay ahayd shirqool loo maleegayay shariif xasan shalay lasoo gaarsiiyay guddoonka baarlamaanka oo ay maantana go’aan cad ka qaadan doonaan.
“Waraaq shirqool ah ayay ahayd qoraalka ka soo baxay xafiiska ra’iisal-wasaaraha oo la doonayay in shacabka iyo caalamka loo sheego in gudoomiyaha uu diiday wadahadal loogu baaqay taasoo shalay warbaahinta laga sii faafiyay,waana qayaano cad oo waliba aan ahay borotokool dowladnimo waayo amar ayay ahayd”ayuu yiri xildhibaanka.
Av.Cumar islow ayaa intaa raaciyay in qoraalkaasi guddoonka lagu amrayay waqtiga iyo goobta uu imanayo taasoo uu ku tilmaamay mid meel ka dhac ah oo la rabay in guddoonka soomaalida loo tuso inuusan diyaar u ahayn in la wada hadlo.
“Maanta ayaan ka shireynaa annga io Guddoomiyaha qoraalkaasi meel ka dhaca u muuqda wixii kasoo baxana waa la arkayaa “ayuu ku gaabsaday xildhibaanka oo ka mid ah gacanyarayaasha shariif Xasan sida Weyn u taabacsan ee abaabula kulamada lagu taageerayo fikirka guddoonka ama kuwa looga soo hor jeedo Xukuumadda farmaajo iyo ragga taageersan.
Shalay ayaa qoraal kasoo baxay qamiistii la gaarsiiyay xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka kaas oo looga codsaday in guddi uu magacaabay ra’iisalwasaare farmaajo ay la kulmaan guddoonka baarlamaanka kaa oo looga hadlayo xiliga kala guurka iyo is faham la’aanta xukuumadda iyo baarlamaanka u dhaxeysa taas oo u muuqtao mid ay ka biyo diidsan yihiin xildhibaanda uu hor boodo shariif xasan sh. aadan.